कपाललाई सुन्दर र स्वच्छ राख्न कस्ता कुरामा ध्यान दिने? - यथार्थ खबर
Madhukar Pandey ९ भदौ २०७८, बुधवार
‘ओहो! तिम्रो अगाडिको भागमा कपाल नै छैन त!’ टाउको त तक्लु हुँदै गएछ।’ भेट्ने बित्तिकै साथीहरूले हालखबर समेत नसोधी टाउकोमै नजर लगाउँदा कपाल झरेर तालु खाली भएका व्यक्तिको अनुहार पक्कै खुम्चिन्छन्। यस्तै समस्याबाट आजभोलि धेरै युवा पीडित छन्।
‘तिम्रो कपाल कति पालतो हुँदै गएछ। पहिला त राम्रो थियो।’ कपालकै विषयलाई फोकस गरेर साथीहरूले कुराकानी सुरु गर्दा युवतीहरूको मन पनि खिन्न हुन्छ होला।
त्यसैले पनि हेर्दा आकर्षक र सुन्दर कपाल होस् भन्ने चाहना महिला पुरुष दुवैमा हुन्छ। तर, कपाल झर्ने समस्याले कतिपय युवाहरूको तालु खाली हुँदै जान्छ। यस्तै युवतीहरू पनि कपाल टुक्रिने, झर्ने समस्याले चिन्तित भइरहेका हुन्छन्। चिकित्सा तथा प्रविधिको युगमा यस्ता समस्या सामान्य बन्दै गएका छन्।
त्यसैले कपाल झर्ने समस्या छ भने अब चिन्तित भएर बस्नुभन्दा पनि कपाल झर्ने कारण पत्ता लगाई समयमै उपचार गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
कपाल झर्ने समस्यालाई मेडिकलको भाषामा एलोपेसिया भनिन्छ। जसरी शरीरमा कुनै रोग वा समस्या हुँदा ज्वरो आउँछ, त्यस्तै एलोपेसिया हुने पनि विभिन्न कारण हुन्छ।
एलोपेसिया भनेको रोग नभई रोगको एउटा लक्षण हो। कपाल झर्ने समस्या दुई प्रकारका हुन्छन्, जसलाई हामी जरा नै मरेको (स्कारिङ एलोपेसिया) र कपाल मात्र झरेको (ननस्कारिङ एलोपेसिया) भन्छौँ।
स्कारिङ एलोपेसिया भनेको कपाल उम्रने भागमा खत बस्नु वा जरा मर्नु हो। कुनै चोटपटक वा घाउ लाग्यो, आगो वा कुनै वस्तुले जल्यो भने कपालको जरा नै मर्छ। त्यसैलाई हामी स्कारिङ एलोपेसिया भन्छौं।
ननस्कारिङ एलोपेसिया भनेको कुनै रोग वा कारणले कपाल झर्ने समस्या हो। यस्तो समस्या हुँदा कपाल झरेपनि कपालको जरा भने बाँकी रहन्छ। जस्तै थाइराइडको समस्या, रगतको कमी, आइरनको कमी, हेमोग्लोविनको मात्रा कम भयो भने कपाल झर्ने समस्या हुन्छ।
कपालसँग सम्बन्धित समस्याहरू अन्य रोगसँग पनि अन्तरसम्बन्धित हुन सक्छ। ननस्कारिङ एलोपेसिया हुनु भनेको शरीरको भित्री अंगहरूमा रोग वा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर हुने समस्या पनि हो। थाइराइडको समस्या, तनाव, मनोवैज्ञानिक समस्या, अनिद्राको समस्या, यौनरोग सिभिलिसलगायत रोग छ भने पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ।
त्यसैले कपाल झर्ने वा नपलाउने समस्या लिएर आएका व्यक्तिहरूमा हामीले पहिला कारण पत्ता लगाउछौं र सोही समस्याको आधारमा उपचार सुरु गछौं।
कतिपय कपाल झर्ने समस्या सुरुमा ननस्कारिङ हुन्छ तर, समयमा उपचार नगर्दा उनीहरूको कपालको जरा पनि मर्न थाल्छ र स्कारिङ हुन्छ।
हामीले देखिरहेका हुन्छौं। धेरै युवाहरूको टाउकोमा अगाडिको भागमा कपाल झर्दै गएको हुन्छ तर पछाडिको भागमा भने कपाल हुन्छ। यो समस्या पनि सुरुमा ननस्कारिङ नै हुन्छ। तर, समयमा उपचार नगर्दा पछि जरा पनि मर्न थाल्छ र स्कारिङ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गर्नुबाहेक कुनै विकल्प रहँदैन।
कपाल मानिसहरूको बाहिरी आवरण हो। कपाल आकर्षण र शारीरिक सौन्दर्यको एउटा अंग पनि हो। तर, कपालले स्वास्थ्यसँग सिधैं सम्बन्ध राख्दैन। कपाल सुन्दरताको लागि मात्रै आवश्यक पर्छ।
कपाल झर्ने वा नउम्रने समस्याको उपचार आवश्यक छ वा छैन ? यो प्रश्न आउन सक्छ। वास्तविकता के हो भने कुनै पनि भित्री रोग वा समस्याले गर्दा कपाल झर्ने समस्या छ भने त्यसको उपचार गर्नै पर्छ। शरीरको बाहिरी आवरण आफ्नो ऐना पनि हो। भित्री शरीरमा समस्याका कारण कपाल झर्ने समस्या छ भने त्यो कारणको उपचार गर्दा कपाल झर्ने समस्या पनि आफै निवारण हुनसक्छ।
कपाल नै झरेर स्वास्थ्यमा ठूलो हानी, नोक्सानी नै भने हुँदैन। तर, शारीरिक सौन्दर्य र आकर्षणको लागि कपाल झर्ने समस्याको पनि उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ। कपाल झर्ने समस्याको उपचार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। व्यक्तिले आफूलाई कपाल राम्रो र आकर्षक बनाउन चाहन्छ भने उपचार गराउन सक्छ।
कमन रुपमा देखिने भनेको एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया अर्थात् पुरुषमा अगाडिको तालुको भागमा कपाल नहुने तर पछाडीको भागमा कपाल हुने समस्या हो। कपाल झर्‍यो भनेर आउने धेरै व्यक्ति यस्तै समस्या लिएर आइरहेका हुन्छन्।
तर कुनै पनि रोगका कारण जस्तै थाइराइड, यौन रोग सिफिलिस लगायतका रोग छ भने पहिला ती रोगहरूको उपचार गर्नुपर्छ।
त्यसैले कपाल झर्ने समस्याको उपचार कारण पत्ता लगाएर र कपाल झर्ने समस्या दुवैको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कपाल झर्ने समस्याको मात्र उपचार गर्दा कारणको उपचार हुँदैन। जसले गर्दा कपालको मात्र उपचार गरेर समस्या समाधान हुँदैन।
कपाल झर्ने समस्याको उपचार तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। तत्कालीन उपचार विधिमा मेनोक्सिल्ड भन्ने औषधि हुन्छ। यो औषधि लगाउन सकिन्छ वा (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा (पिआरबी) भन्ने थेरापी गर्न सकिन्छ। कपाल झर्ने समस्या तत्काल रोक्न खाने औषधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर, यी विधि टेम्पोररी मात्र हुन्छ। किनकि, यो विधिमा नियमित औषधि उपचारमा रहँदासम्म कपाल झर्ने समस्या हुँदैन। तर, यो विधिलाई नियमित गर्न सकिएन भने फेरि कपाल झर्न थाल्छ। त्यसैले कपाल झर्ने समस्यामा टेम्पोररी उपचार विधिभन्दा पनि दीर्घकालीन उपचार विधि राम्रो हुन्छ। दीर्घकालीन उपचार विधिका लगि पछाडिको भागको कपालको रौं निकालेर कपाल नभएको भागमा प्रत्यारोपण गर्ने हो। यसलाई कपाल प्रत्यारोपण (हियर ट्रान्सप्लान्ट) भनिन्छ।
कपाल प्रत्यारोपणको दुईवटा विधि छ, जसलाई फोलिक्युलर युनिट ट्रान्सप्लान्ट ( एफयुटी) भनिन्छ। यसमा टाउकोको पछाडिको भाग अर्थात् अक्सिपिटरबाट स्टिप्ट छालाको भाग निकालिन्छ। त्यसमा कपाल हुन्छ। त्यो कपाललाई अगाडि कपाल नभएको भागमा राखिन्छ। कपाल निकालिएको पछाडिको भागमा टाका लगाइन्छ। यो पुरानो विधि हो। यो विधि अहिले धेरै प्रयोग हुँदैन। अहिले बढी प्रयोग भइरहेको टेक्नोलोजी भनेको फ्लोलिक्युलर युनिट एक्स्ट्रयाक्सन (एफयुइ) विधि हो। यो विधिमा अक्सिपिटरमा रहेको कपाललाई पञ्चको सहायताले एउटा एउटा कपाल झिक्ने र कपाल प्रत्यारोपण नभएको ठाउँमा रोप्ने गरिन्छ।
कपाल प्रत्यारोपणमा सामान्यतया महिला तथा पुरुषको शरीरमा हुने एन्ड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन हर्मोन हुन्छ। त्यही हर्मोनको कारण कपाल झर्ने समस्यामा चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण गरिन्छ। यदि टाउकोको पछाडिको भागमा कपाल छ भने कपाल रोप्न सकिन्छ। त्यसका लागि कम्तिमा पनि पुरुषमा ४ हजार ४५ सय कपाल निकाल्न सक्ने कपाल पछाडिको भागमा हुनुपर्छ। यस्तै महिलाको लागि भने लामो कपाल हुने भएकाले पछाडिको भागको १५ सय २ हजार कपाल निकाल्न सम्भव छ भने अगाडिको भागमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। यदि पछाडिको भागमा पनि कपाल नै छैन भने यसरी कपाल प्रत्यारोपण गर्न सम्भव हुँदैन।
यदि शरीरमा कुनै रोग जस्तै अनियन्त्रित मधुमेहको समस्या हाइपोटेन्सन, उच्च रक्तचापको समस्या छ भने प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन। यस्तै टाउकोमा चक्काचक्का जस्तो गरी कपाल झरिरहेको छ भने पनि प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन। तर, कपाल प्रत्यारोपण हर्मोनको कारण कपाल गर्ने समस्या भएका व्यक्तिमा टाउकोको पछाडिको भागमा कपाल छ भने प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि व्यक्तिले कपाल प्रत्यारोपण गर्नुअघि मधुमेह, हाइपोटेन्सन छ भने त्यो नियन्त्रित भएको हुनुपर्छ। यस्तै कपाल झर्ने समस्याको उपचारका लागि औषधि लगाइरहेका व्यक्तिले त्यो औषधि कपाल प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा २ साताअघि नै औषधि उपचार बन्द गर्नुपर्छ। यस्तै नक्कली कपालहरू हालेका व्यक्तिले त्यो दुईचार दिन अघि नै निकाल्नुपर्छ। कपाल प्रत्यारोपण माइनर सर्जरी भएकाले धेरै जटिल भने हुँदैन।
अहिले कपाल झर्ने समस्याका कारण कपाल प्रत्यारोपण गराउन २५ देखि ३५ वर्षका पुरुष बढी आउनुहुन्छ। महिला र पुरुषको तुलनामा पुरुषहरू बढी आउने गर्छन्। किनकि, यो एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी हुने भएकाले महिला भन्दा पुरुषहरू बढी आउने गरेको पाइन्छ।
प्रत्यारोपण गरेको कपाल लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्छ भन्नको लागि कपाल प्रत्यारोपण अघि नै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कपाल प्रत्यारोपणका लागि टाउकोको पछाडिको भागमा हुने कपाल निकालेर प्रत्यारोपण गर्दा लामो समयसम्म रहन्छ। कुन ठाउँको कपाल बलियो छ भनेर विशेषज्ञहरूले हेरेर मात्र छुट्याउन सकिन्छ। त्यसैले कपाल प्रत्यारोपण गराउँदा तालिमप्राप्त विशेषज्ञसँग परामर्श लिएर गराउनुपर्छ। यदि सेफ जोनरजोनबाट कपाल निकालेर प्रत्यारोपण गरिएको छ भने त्यो कपाल १५ देखि २५ वर्षसम्म झर्ने समस्या हुँदैन।
कपाल प्रत्यारोपण कार्य सेवा हो, सामग्री होइन। त्यसैले कपाल प्रत्यारोपण गराउने चिकित्सकको योग्यता र कपाल प्रत्यारोपण गर्दा आउने नतिजाको आधारमा यसको खर्च निर्धारण हुन्छ।
कपाल प्रत्यारोपण क्लिनिक र डाक्टरको क्षमता, दक्षता अनुसार फरक–फरक रहेको पाइन्छ। सामान्यतया कति कपाल झरेको छ? कति कपाल प्रत्यारोपण गराउने? सोही अनुसार खर्च लाग्न सक्छ। काठमाडौंहरूमा प्रतिग्राफ्ट ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म पर्छ। यसरी हेर्दा एउटा व्यक्तिले ३ हजार ४ हजार कपाल प्रत्यारोपण गराउनु छ भने २ लाख सम्म खर्च लाग्नसक्छ।
कपाल झर्ने समस्या आउँदै नदिन आन्तरिक रोग छ भने त्यसको समयमै उपचार गर्नुपर्छ।
कपालमा साबुनको प्रयोग गर्ने, धेरै तातोपानीले नुहाउने, विभिन्न केमिकलहरू प्रयोग गर्ने, केराटिन गर्ने, स्प्रे गर्ने लगायत कृतिम विधिबाट कपाल राम्रो बनाउन गरिने अनावश्यक प्रोसिडरको कारण कपाल झर्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले कपाल राम्रो बनाउने नाममा अनावश्यक कस्मेटिक ट्रिटमेन्ट गराउनु हुँदैन।
यस्तै कपालमा साबुनको प्रयोग गर्नु हुँदैन, कपालको प्रकृति अनुसार स्याम्पुको प्रयोग गर्नुपर्छ। महिलाहरूको कपाल लामो छ भने कन्डिसनलको प्रयोग गर्दा कपाल राम्रो हुन्छ, तर पुरुषको कपाल छोटो हुने भएकाले कन्डिसनलको आवश्यकता पर्दैन।
नेपालीहरूमा एउटा बानी छ, कुनै साथीले प्रयोग गरेको सामग्रीले साथीको कपाल राम्रो भयो भने अर्को व्यक्तिले पनि त्यही प्रयोग गर्ने। जुन, बानी गलत छ। किनकि, व्यक्ति अनुसार शरीर वा कपालको प्रकृति फरक हुन्छ। त्यसैले साथीलाई राम्रो नतिजा दिएको सामग्रीले आफ्नो कपालमा पनि राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने हुँदैन।
त्यसैले विशेषज्ञलाई आफ्नो कपाल देखाएर कपाल अनुसार स्याम्पुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। कपाललाई जोगाइराख्न धेरै मुस्किल छैन। तर, जेनेटिक एलोपेसियाको समस्या, हर्मोनको कारण कपाल झर्ने समस्या छ भने मात्र उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित कपालको केयरमा ध्यान दिन सकियो भने कपाल झर्नबाट रोक्न सकिन्छ।
कपाललाई सुन्दर र स्वच्छ राख्नको लागि स्याम्पु, कन्डिसनलको प्रयोग कपालको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्छ। कपालमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ। कपाल स्वस्थ राख्न, पोषकतत्त्व भएको खाना खानुपर्छ, अनिद्राको समस्या आउन दिन हुँदैन। कपालमा जथाभावी स्प्रे गर्ने, स्टेट गर्ने, केराटिन टिटमेन्ट, हेयर ड्राइ गर्ने बानी हटाउनुपर्छ। सम्भव भएसम्म कपाललाई उपयुक्त हुने स्याम्पु नियमित प्रयोग गर्ने, केमिकलहरूको प्रयोग नगर्ने र नरिवलको तेल र भिटामिन इ क्याप्सुलले सातामा एक वा दुईपटक मसाज गर्दा कपाल लामो समयसम्म राम्रो रहन्छ।swasthyakhabar